रोपाइँ | Ratopati
रोपाइँको रमाइलो, तस्बिरमा हेर्नुहोस् access_timeजेठ १८, २०७८
देश यतिबेला कोरोना महामारीको दोस्रो लहरसँग संघर्षरत छ । मानिसहरु लकडाउनका कारण घरमा नै सिमित हुन बाध्य छन् । तर किसानहरू कहाँ घरमा सिमित हुन पाउनु ? आफ्नो कृषि कर्मलाई निरन्तरता दिनै पर्यो । वर्षा सुरु भएपछि किसानहरू रोपाइँमा व्यस्त हुन थालेका छन् । काठमाडौँको साँ...
देशभर करिब ९६ प्रतिशत रोपाइँ, धान उत्पादन वृद्धि हुने प्रक्षेपण access_timeसाउन १५, २०७७
काठमाडौं । देशभर धान रोपाइँ ९५.६० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । योसँगै देशमा धान रोपाइँ लगभग सकिएको छ । उच्च पहाडी तथा मध्य पहाडी जिल्लाका केही स्थानमा रोपाइँ बाँकी छ भने अन्यत्र लगभग रोपाइँ सम्पन्न भइसकेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.हरिबहादुर केसील...
करिब ४ प्रतिशत मात्र रोपाइँ बाँकी, धान उत्पादनमा बृद्धि हुने प्रक्षेपण access_timeसाउन १५, २०७७
काठमाडौँ । धान रोपाइँ ९५.६० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । योसँगै देशमा धान रोपाइँ लगभग सकिएको छ । उच्च पहाडी तथा मध्य पहाडी जिल्लामा केही रोपाइँ बाँकी रहेका छन् भने अन्यत्र लगभग रोपाइँ सम्पन्न भइसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.हरिबहादुर केसीले बताए । १३ लाख ७१ हजार ७०...
बाढीले जलमग्न भएको ठाउँमा कसरी भयो धान रोपाइँमा वृद्धि ? access_timeसाउन ८, २०७७
काठमाडौं । देश बाढीले जलमग्न भएको बेला कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले धान रोपाइँमा वृद्धि भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । अविरल वर्षाका कारण प्रायः समतल ठाउँका खेतबारीहरु डुबानमा परेका छन् । यद्यपि मन्त्रालयले अविरल वर्षाकै बीच डुबान, बाढी तथा पहिरोको प्रकोपले ...
कोरोनाले धान रोपाइँमा सहयोग, कहाँ कति रोपाइँ सम्पन्न ? access_timeसाउन २, २०७७
काठमाडौं । कोरानो भाइरसले विश्वकै अर्थतन्त्रलाई तहसनहस बनाइरहेको बेला कृषिमा भने आशा जागेको छ । कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि सरकारले जारी गरेका लकडाउनका कारण धेरै क्षेत्र अस्तव्यस्त भए पनि कृषि क्षेत्रमा भने सकारात्मक परिणाम देखा पर्न थालेको छ । विगतका वर्षका त...
खोकनाको फरक दृश्य : रोपाइँ गर्न पुगेका किसान र प्रहरीबीच घम्साघम्सी (तस्बिरहरु) access_timeअसार १५, २०७७
काठमाडौं । आज असार १५ अर्थात राष्ट्रिय धान दिवस । मानो रोपेर मुरी उब्जाउने दिनका रुपमा लिइने असार १५ मा ललितपुरको खोकनामा भने फरक दृश्य देखियो । काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक पर्ने जग्गामा स्थानीय किसानले रोपाइँ गर्न लागेपछि पुगेको प्रहरीले रोक्ने...
प्रदेश २ : १५ प्रतिशत धान रोपियो, मलको अभावले किसान चिन्तित access_timeअसार १५, २०७७
जनकपुर । ‘धान उत्पादनमा वृद्धि, आत्म निर्भरता र समृद्धि’ भन्ने मूल नाराका साथ १७ औँ धान दिवस मनाइँदैछ । १७ औँ धान दिवसको अवसरमा प्रदेश नम्बर २ का मन्त्रीहरुदेखि स्थानीय पालिकाका प्रमुखहरु समेत खेतमै पुगेर धान रोपेर रोपाई सुरु गरेका छन् । ...
भक्तपुरमा ६५ प्रतिशत रोपाइँ सकियो access_timeअसार ४, २०७७
भक्तपुर । कोरोना जोखिमका बीच यहाँ किसानलाई रोपाइँको चटारो परेको छ । हरेक वर्ष असारको पहिलो सातापछि रोपाइँ शुरु हुने यहाँ यस वर्ष असारको पहिलो साता नै रोपाइँको अन्तिम चरणमा पुग्ने भएको छ । यस वर्ष मनसुन सक्रिय हुनुअघि नै पर्याप्त वर्षा भएपछि कोरोनाको त्रास र लकडाउ...